Xilli ay 48 saacadood ka harsan yihiin Xuska Maalinta Xorriyadda & Calanka Somalia, waa sidee xaalka Jidka 26-ka Juun?! | Hadalsame Media
Home Wararka Xilli ay 48 saacadood ka harsan yihiin Xuska Maalinta Xorriyadda & Calanka...
Xilli ay 48 saacadood ka harsan yihiin Xuska Maalinta Xorriyadda & Calanka Somalia, waa sidee xaalka Jidka 26-ka Juun?!
(Muqdisho) 23 Juun 2021 – Waxaa ina soo haya oo ay haatan 2 maalmood oo qur ihi ka hareen Maalmaha Xorriyadda, Midnimada & Calanka Somalia oo taxan 26-ka Juun ilaa 1-da Luulyo.
Maalmahan ayaa kala ah Maalintii ay xornimada qaateen gobolladda woqooyi oo calankii koonfurta lagu sameeyey 12-kii Oktoobar 1954-kii laga taagey Hargaysa, iyo Maalintii Midowga iyo Xorriyadda gobollada koonfurta oo ku beegan 1-da Luulyo.
Haddaba, waloow ay 48 saacadood maalmahaa ka harsan yihiin misna waa sidee Jidka loogu magac daray 26-ka Juun oo ah waddo marta qalbiga Muqdisho?
Waddadan 26-ka Juun ayaa isku xirta Jidadka Shaqaalaha ilaa Kaasa Balballaare (Casa Popolare) ee magaalada Muqdisho.
Jidka ayaa jajabnaa oo aan la dayactirin muddo 3 sanadood ah, iyadoo uu weliba qashin dhex tuban yahay sida ay sheegayaan dadkii soo arkay, taasoo muujinaysa in la dayacay jid muhim ah oo mudan in la dayactiro, waana eed u taal DF iyo Maamulka Gobolkaba.
Previous articleTOOS u daawo: Czech Republic vs England, Croatia vs Scotland – LIVE (Shaxda Sugan)
Next articleMadaxwaynihii Gobolka Tigraay Debresiyom Gebremichael oo maq qura soo muuqday & halka loo malaynayo